Ahoana no nahombiazanao tamin'ny famoronana rohy mankany amin'ny tranokalanao?
Ny fananganana backlinks amin'ny tranokalanao dia tena zava-dehibe amin'ny fikarohanao ny fikarohana pejy sy ny fitomboan'ny orinasa amin'ny ankapobeny. Nalaina tamin'ny ankapobeny, afaka manatsara ny fitokisan'ny tranonkalanao ianao, manatsara ny fifamoivoizanao ary manampy anao hiakatra eo an-tampon'ny SERPs ao amin'ny Google.Eny, ny famoronana rohy mankany amin'ny tranonkalanao dia mety ho asa goavana. Saingy tsy ilaina ny manahy. Na izany na tsy izany, azonao atao ny mangataka vahaolana maromaro mifanentana tsara izay efa nahazahoako ny fifanakalozan-kevitra bebe kokoa sy ny isa ambony kokoa. Ireto misy izy ireo: fanasana an-tserasera amin'ny blaogy malaza momba ny tombontsoa ambony indrindra, mifandray amin'ny forum sy ny blaogy mifandraika amin'ny indostrian'ny orinasa, ary ny fametrahana ny hetsika tsy tapaka ao amin'ny media sosialy. Noho izany, etsy ambany aho dia hamerina hijery ireo drafitr'asa telo ireo amin'ny antsipiriany.
Ny fandefasana hafatra amin'ny blaogy malaza momba ny top relevancy dia mety ho vahaolana mahomby ho an'ny famoronana rindranasa ho an'ny tranonkalanao. Midika izany fa afaka maimaim-poana ianao miasa amin'ny DoFollow backlinks, izay mety tsara ho an'ny mpijery malalaka kokoa amin'ireo mpanjifany tsy manam-paharoa, mifanaraka amin'ny fanorenana tranokala maherisetra amin'ny Internet. Mazava ho azy, ny lazan'ny blaogy vahiny dia mety ho lazaina ho tetik'ady vaovao amin'ny famoronana rohy mankany amin'ny tranokalanao. Fa ho an'ny fandefasana hafatra mahomby kokoa amin'ny blaogy mahazatra dia manoro hevitra aho amin'ny fijerena ireto hevi-bala manaraka ireto:
ny tanjon'ny bilaogy vahiny dia ny hampihetsi-po ny mpihaino anao hahazoana famangiana, fitarihana, fanarahana ary famandrihana
mampiasa ny demografika mpampiasa tranonkala hitady ny blaogera manan-danja sy manan-danja, izay tokony ho liana amin'ny mpihaino azy izay liana amin'ny famakiana ireo asa soratra vahiny
tokony hampifandray amin'ny pejy mitongilana, fa ity ihany no afaka manatsara Ny fifanakalozan-kevitry ny tranonkalanao, ny fanamafisana ny fikarohana nataon'ireo mpikaroka amin'ny fotoana mitovy
dia tsy manadino ny manonona ireo mpitarika indostrianao sy ireo mpitarika hafa manam-pahefana mba hampiasa kokoa ny mpihaino marobe, rehefa mizara ho an'ny namany bilaogy sy kaonty manokana amin'ny haino aman-jery sosialy samihafa.
Industry Forums and Blogs
Azo inoana fa handoa vola amin'ny fifandraisana amin'ny vondrom-piarahamonin'ny blaogy maro be sy ny forums mifandraika amin'ny indostrian'ny orinasanao. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny hanolotra fomba fijery sarobidy momba ny anao manokana sy ny fanatrehana resadresaka eo amin'ny toerana momba ireo lohahevitra faran'izay sarotra momba ny lohahevitra fototra amin'ny tranonkalanao. Miezaha hahalala tsara ny torohevitra hitanao ary hajao mora foana ny manome ny feonao manam-pahefana ara-potoana. Amin'izany fomba izany, dia mety ho azonao kokoa ny fifandraisana ao NoFollow ao. Na dia izany aza, tsy ny sehatry ny sehatra indostrialy sy ny blaogy rehetra dia manome alalana ho an'ny fifandraisana amin'ireo NoFollow irery ihany.
Ny fametrahana ny hetsika tsy tapaka amin'ny loharanom-baovao sosialy samihafa dia ny fomba fahatelo indrindra amin'ny famoronana rohy mankany amin'ny tranokalanao. Ny zava-misy anefa, dia tsy ny tranonkala ara-tsosialy rehetra no mamela ny rohy DoFollow. Na dia izany aza, ireo mpitarika tahaka ny Twitter, Instagram sy Facebook dia mety ho ampiasaina amin'ny fananganana fifampiraharahana tsy tapaka sy mavitrika mba hahazoany tombontsoa amin'ny fampiroboroboana haingana miaraka amin'ny isa maromaro ary misy fanamarihana. Na izany na tsy izany, afaka maimaim-poana hatrany ny rohy DoFollow amin'ny Google Plus, LinkedIn, Pinterest, sns. Ny zavatra rehetra ilainao eto dia ny mitazona fandaharam-potoana tsy tapaka, miaraka amin'ny fanarahamaso ny valin'ny fanovana nataonao Source .